I-Chameleon Bure - Inhle..Ukuthula.. Ibhishi - I-Airbnb
I-Chameleon Bure - Inhle..Ukuthula.. Ibhishi
Savusavu, Northern Division, i-Fiji
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Property
I-Chameleon Bure yethu ihlezi kuyi-35 acre Copra Plantation amamitha angu-80 kuphela ukuya onqenqemeni lwamanzi. Inolwandle oluthandekayo nokubukeka kwamahlathi emvula. Indawo yayo yangasese nangaphandle kwendawo engahanjwa njalo ilungele labo abathanda ukuba wedwa ngokuba nendawo yasebhishi engasese yokubhukuda, ukuhamba ngezinyawo noma ukuphumula kuyo. Singamakhilomitha angaba ngu-35 ukusuka edolobheni lase-Savusavu kodwa kulula ngemizuzu engu-30 ukuya noma ukubuya edolobheni emgwaqeni ohlaba umxhwele.
I-Chameleon Bure yethu iyindlu enhle enamakamelo okulala angu-1 futhi ingalala abantu abangaba ngu-4 embhedeni owodwa we-queen kanye nalabo abalala usofa owodwa abangu-2 egumbini lokuphumula. Inekhishi eligcwele le-galley elinesiqandisi, isitofu nazo zonke izinto zasekhishini. Ikamelo lokuphumula linomabonakude onenqwaba yamabhayisikobho.
I-Savusavu Town inezitolo zokudla ezingu-3, i-mharmacy, iMakethe yezithelo ezintsha nemifino, amabhange angu-3 nama-ATM, Izitolo zokudlela nezitolo zekhofi, izitolo zehadiwe nezitolo zezipho. Siphinde sibe yikhaya le-J hunls, ukutshuza okuhle kakhulu, ukubhukuda ngaphansi kwamanzi kanye nokudoba olwandle okujulile kanye nezimpophoma ezinhle!
Abanikazi basendlini njengoba kuyisitshalo esisebenzayo futhi kukhona noma yimuphi umelekeleli ngokwesidingo.
Hlola ezinye izinketho ezise- Savusavu namaphethelo